Maxay sidan ugu burbutay magaalada Awaamiya ee dalka Sacuudiga? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka REUTERS/FAISAL AL NASSER
Image caption Baabuur la gubey oo taala dariiqyada Awamiya
"Waxaad haysataa daqiiqado kooban oo aad dhulka taagnaan kartid, markii aan ku dhahno 'dhaqaaq', waa in ay aad horay ka orodaa" ayuu yiri sargaal ka tirsan booliiska Sucuudiga oo la hadlayay wariyaheena oo saaran gaari nooca qafilan ah oo kusii jeedey magaalada Awamiya.
Image caption Askariga roondeynayo Awamiya
"Dowladda Sucuuida ma ogola mucaarad, haddii ay ahaan lahayd mid ka imanaya sunniga ama shiicada, ma ahan kuwa dulqaad leh" ayuu yiri Cali Adubisi oo ah agaasimaha hay'adda xuquuqul insaanka Sucuudiga oo fadhigeedu yahay magaalada Baarliin ee dalka Jarmalka.
Image caption Cagaf-cagaf ka mid ah kuwii guryaha lagu burburiyey
"Siddeetan guri ayaa la dumiyey, waxaa inoo dhiman 400 kale, waxaana jira guryo aad u duugoobay, waana in la casriyeeyaa" ayuu yiri sii hayaha duqa magaalada Cisam Cabdiladhif Al Mulla.
"Qoysaskii halkan degganaa meelo kale ayaa loo raray, dowladdana waxa ay siisay magdhow fiican" ayuu intaasi ku daray.
Image caption Rasaas ayaa ku taala gidaarada oo dhan
"Argagixisada waxa ay laayeen shacabka, dadkana waxa ay u isticmaaleen sidii gaashaan, dadkana sababta ay meesha oga qaxeen waxa ay tahay in ay naftooda kala baxsadeen dhibaatada kooxaha falaagada" ayaa lagu yiri warka qoraalka ah.
Image caption Meelaha burburay waxaa ka mid ah masaajidada
"Ciidamada waxa ay toogtaan qof kasta oo ay arkaan, nin, naag, qof weyn, ama ilmo" ayuu yiri mid ka mid ah dadkii ka qaxay magaalada Awamiya oo ku sugan dalka Jarmalka.
"Waxaa suurtogal ah in dil toogasho lagugu xukumo Sucuudiga, sababta kaliya ay tahay in aad Shiico tahay ama diin kale aad haysato" ayuu intaasi ku daray.
Xiisad ka taagan magaalada Awamiya ee bariga Sacuudiga
Sacudiga oo weriyayaal kusoo wareejiyay magaalo ay kula dagaalameen Shiico
Image caption Ciidamada waxa ay xireen meelaga gala galo magaalada
Image caption Sheekh Nimr Al Nimr waxa uu ka mid yahay dadkii ay dowladda Sucuudiga xukunka dilka ku fulisey